Amabhulukwe anqunyiwe nezicathulo, ungawahlanganisa kanjani kahle | Amadoda aSitayela
Umhlahlandlela ocacile wokuhlanganisa amabhulukwe anqunyiwe nezicathulo
Kuyiqiniso ukuthi amabhulukwe aqhephukile afuna okungaphezulu kwethu uma kuziwa ekuwahlanganiseniNoma ngabe yilokho okukubuyisela emuva, lo mhlahlandlela uzokukhombisa ukuthi ungaphansi kakhulu kokucabanga kwakho, ngoba ahlukahlukene kakhulu.
Ukubonisa amaqakala kwenza isitayela sibe sesithunzi futhi kungeze ukuthinta okupholile kakhulu kunoma yikuphi ukubukeka. Ngokuba nemilenze emifushane, amabhulukwe aqhephukile asisindisa ekutheni sigoqe umphetho. Futhi, lokhu kusika akugcini ngesitayela esisodwa sebhulukwe. Umkhuhlane onqanyuliwe uthinte ama-jean, ama-chinos namabhulukwe okugqoka ngokulingana, okusinikeza ithuba lokukugqoka kokubili ngesikhathi sethu sokuphumula nasehhovisi.
1 Ngezicathulo zemidlalo
4 Awekho amasokisi
I-blue eluhlaza okwesibhakabhaka
Njengoba ubona, uhla lwamathuba lapho kuhlanganiswa amabhulukwe anqampile nezemidlalo livulekile impela. Zisebenza kahle ngamamodeli azo zonke izindawo eziphakeme, imibala, nezinto zokwakha.
Ukubukeka okulungele ihhovisi, khetha imodeli enqunyiwe yesartorial bese ungeza izicathulo zakho zokugqoka ezinhle kakhulu. Uma kukhulunywa ngamasokisi, uma ufuna okuthile okusangulukile, funa lawo anombala ofanayo nebhulukwe, kepha okungenani ama-shades ambalwa alula noma amnyama. Ungayinika nomphumela wesitiladi, uma ubheja emaphethini noma kumbala ongahlobene namabhulukwe noma isicathulo.
Ukuwagqoka ngamabhuthi akho e-Chelsea, kubalulekile ukuthi ukusikwa kwamabhulukwe kucace noma kube mncane. Imilenze ebanzi nayo iyasebenza, inqobo nje uma ithotshisiwe, okungukuthi, inesimo esiyindilinga. Esikubhekile wukugwema ukuthi izinyawo zethu ziba zincane kakhulu maqondana nengaphansi yebhulukwe.
Le nhlanganisela isebenza kahle kakhulu lapho womabili amabhulukwe namabhuzu kumnyama.. Amasokisi ayimpoqo (futhi amnyama) kumamodeli emilenze emifushane kakhulu, njengaleyo engakwesokudla. Lapho isikhala esisele phakathi kwe-bootie nebhulukwe sincane, singenza ngaphandle kwazo uma sikubona kufanelekile, njengakwimodeli engakwesobunxele.
Okusikwe ngaphandle kwamasokisi kuzosinika umoya we-preppy noma we-bohemian, kuye ngohlobo lwezicathulo esizikhethayo, kanye nayo yonke ingubo. Uma ubheja ngale ndlela, engagcini ngokukhethekile kunoma iyiphi inkathi (isebenza kuzo zombili izinyanga ezifudumele nezibandayo), ungakhohlwa amasokisi akho angabonakali.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Umhlahlandlela ocacile wokuhlanganisa amabhulukwe anqunyiwe nezicathulo
Amakhambi asekhaya azokusiza usinde kuKhisimusi